Owona maqhinga mane abalaseleyo kwiGoogle Pixel 3 kunye 3 XL | I-Androidsis
I-Google Pixel 3 kunye ne-3 XL zaziswa ngokusemthethweni ekuqaleni kuka-Okthobha, kweli nqaku ungazi yonke into ngabo. UGoogle uhlaziye iifowuni zakhe, uyilo olutsha lweenotshi zemodeli enkulu. Ukufota kunye nobukho boMncedisi kaGoogle zizinto ezimbini eziphambili kwezi zixhobo. Ukongeza, ukubakho kwayo kuphuculwe ngokubonakalayo.
Kuba ifemi ibabeka kwintengiso kumazwe amaninzi, isenza kube lula kubathengi ukuba bathenge ezi Pixel 3 kunye ne-3 XL. Emva koko, sikushiya ne amanye amaqhinga onokuthi ufumane okuninzi kwezi fowuni. Ke ukuba unayo okanye ucinga ukuyithenga, baya kukunceda.
1 Indawo yasimahla
2 Musa ukuphazamisa imo
3 Ukukhanya ebusuku
4 Ziphephe iifowuni eziphazamisayo
Ngelixa iGoogle Pixel 3 ifika nge-64 GB yokugcina kwangaphakathi, kunokubakho abasebenzisi abancinci kwaye iphele izalisa. Ngethamsanqa, ifowuni ngokwayo inako ukukhulula indawo, into esinokuyenza ngeendlela ezahlukeneyo kwifowuni yethu, njengoko sele kunjalo sikubonise ngaphambili.
Eyona ndlela yokuvula indawo kukuya kuseto lwefowuni. Ngaphakathi kuseto, siya kwicandelo lokugcina Apho sifumana ukhetho ekuthiwa kukhulula indawo. Siyabulela kuyo, siya kuba nakho ukushenxisa okungabalulekanga okanye okungafunekiyo emnxebeni, ukuze silibale ngale ngxaki yendawo. Nangona ifowuni sele inayo Ingxaki encinci malunga nayo.
Musa ukuphazamisa imo
Kunokubakho ixesha apho sixakeke khona kwaye sifuna nje ukuzola, singaphazanyiswa zizaziso. I-Google Pixel 3 inamathuba okuvula oku kungasentla akuphazamisi imowudi. Siyabulela kule ndlela asiyi kufumana izaziso zaluphi na uhlobo. Oko kuyakusivumela ukuba sigxile kwimisebenzi ethile.
Indlela yokuyisebenzisa ilula kakhulu. Kuya kufuneka ubeke ifowuni ujonge phantsi kuyo nayiphi na indawo. Ngale ndlela, uya kuyeka ngokuzenzekelayo ukufumana izaziso. Kwimeko apho ufuna ukwenza okanye usebenze umsebenzi, amanyathelo ekufuneka elandelwe ngala: Ngenisa iisetingi, emva koko inkqubo kwaye phaya kwicandelo lezimbo zomzimba. Olunye ukhetho kukuJikelezisa kwisimumu, esenza ukuba oku kungaphazamisi imowudi.
Inokuba yinto eyaziwayo kancinci kubasebenzisi abaninzi abaneGoogle Pixel 3. Nangona iifowuni zisinika ithuba lokuvula ukukhanya ebusuku, siyayibona indlela ekutshintsha ngayo ukukhanya okukhanyisa isikrini. Itshintsha ithoni, iyenza ibe lula ngakumbi into yokunxiba ebusuku, kunye nokungabi ndlongondlongo okanye ukucaphukisa amehlo ethu. Kwaye indlela yokwenza oku kukhanya ebusuku kulula kakhulu.
Kuya kufuneka sivule useto lwefowuni. Ngaphakathi kuyo, kufuneka siye kwicandelo lescreen kwaye iyakubakhona ngaphakathi apho sifumana indawo ebizwa ngokuba kukukhanya ebusuku. Into ekufuneka siyenzile kukuyenza isebenze, kwaye siza kubona ukuba ukukhanya kwesikrini kuguquka njani ngokuzenzekelayo.
Ziphephe iifowuni eziphazamisayo
Umncedisi kaGoogle unendima egqibeleleyo kwifowuni, njengokuba besesikuxelele ngamanye amaxesha. Kuba iyakuphendula iifowuni ngabasebenzisi. Unokusebenzisa umncedisi kwezi Pixel 3 ukunqanda iminxeba ecaphukisayo. Ngumsebenzi obizwa ngokuba ngumnxeba weScreen ukuba sikhona kuyo. Lukhetho olufanelekileyo lokujonga kwimeko apho abantu esingabaziyo besitsalela umnxeba.
Xa inombolo engaziwayo isitsalela umnxeba, sinokusebenzisa lo msebenzi woMncedisi kaGoogle. Okwangoku kukho umnxeba ongenayo, siya kubona kwiscreen esinethuba lokusebenzisa umsebenzi weScreen Call. Ngokucofa olu khetho, omnye umntu uya kufumana umyalezo othi sisebenzisa olu bhaqo, kwaye Uyacelwa ukuba uchaze igama lakho nesizathu kulowo usibizayo.
Utheni umntu, iya kuboniswa kwiscreen sePixel 3 yethu. Emva koko siya kuba nethuba lokuphendula ngomyalezo, simakishe njengogaxekile okanye sithumele impendulo ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ukukopela kwe-Android » Amaqhinga okufumana okungakumbi kwiGoogle Pixel 3 kunye 3 XL
Iimpawu zokufumana okuninzi kwiiMaphu zikaGoogle